Amụma maka oge oyi 2017 na 2018 mgbe oge oyi na-amalite? | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu ka oge oyi ga-adị?
Monica sanchez | | Amụma
Oge oyi bụ oge anyị na-ejikọkarị na oyi, ihu igwe snow, oyi, egwuregwu snow. Mana ọ dị ka obere oge mgbụsị akwụkwọ na-agbatị, na ụbọchị ole na ole gachara, nke edebara aha ala dị ala, mana n'oge na-adịghị anya ha gafere ma oge opupu ihe ubi laghachi. Keduzi ebe oyi a mere anyị ji ama jijiji oge ọ bụla anyị gara n'okporo ámá? Ọbụna ọ dị ka ebili mmiri oyi anyị nwere ugbu a adịghị ka ọ dị na mbụ.
N’isiokwu a anyị ga-enyocha etu etu oyi 2017 siri dịrị, na otu o si adi na afo ole na ole sochirinu. Kedu mgbe oge oyi na-abata? Ka anyị hụ ya.
1 Kedu mgbe oge oyi na-abata?
2 Oge nchịkọta 2017
3 Nchịkọta Winter 2016
4 Kedu oge udu mmiri 2018 ga-adị? Na ndị na-esote?
Kedu mgbe oge oyi na-abata?
¿Mgbe oge oyi bidoro? Oge oyi bụ oge ọtụtụ ndị tụrụ anya ya. Mgbe oge ọkọchị na-ekpo ọkụ nke ukwuu, ị na-achọkarị ọnwa kacha oyi n’afọ n’abịa n’otu n’otu. N’agbanyeghi na ha nwere ike iwetara anyi oria ozo, di ka flu ma obu oyi, n’oge a anyi choro icho n’okporo ama ma obu n’ime ime obodo ma nwee ogu egwuregwu.
Ma olee mgbe oge oyi na-abata? Ọfọn ọ ga-adabere na mpaghara ụwa nke ị nọ n'ime ya 🙂. Yabụ, ọ bụrụ na ịnọ n'akụkụ ugwu, ụbọchị izizi ga - abụ Disemba 20 ma ọ bụ 21, ebe ọ bụrụ na ị nọ n'akụkụ ndịda, ụbọchị ahụ bụ June 20 ma ọ bụ 21.
Oge nchịkọta 2017
Dabere na data nke State Meteorological Agency (AEMET) nke oyi nke 2017 nwere ihu ọma na-ekpo ọkụ ma na-akpọ nkụ. Ogologo okpomọkụ bụ 8,5ºC, nke bụ 0,6ºC karịa nkezi maka oge a, na-ewere 1981-2010 dị ka oge ntụgharị. Ọ bụ oge nke iri na atọ na-ekpo ọkụ kemgbe 1965, na nke anọ na-ekpo ọkụ kemgbe 2015st narị afọ malitere, n'azụ 16-2000, 01-2007 na 08-XNUMX.
Ha debara aha ha n’akwụkwọ anomalies ọkụ dị mma gburugburu + 1ºC na Galicia, Catalonia, Balearic Islands, Valencian Community, yana Cantabrian, Iberian na Central system, ndịda ọwụwa anyanwụ nke Castilla-La Mancha na ndịda ọdịda anyanwụ nke Castilla y León. Na mba ndị ọzọ, ọgba aghara ndị ahụ adịghị mma, n'etiti 0 na -1ºC.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere mmiri ozuzo, ọ na-adịkarị nkụ, na nkezi mmiri ozuzo 20% na-erughị ka ọ na-adị, nke bụ 160mm. Disemba na Jenụwarị akpọọla nkụ, mana na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ nke peninshula na agwaetiti Balearic bụ ebe mmiri na-ekpo. Na Canary Islands, Extremadura na etiti Andalusia ọ kpọrọ nkụ ma ọ bụ dị nkụ.
Nchịkọta Winter 2016
Oge oyi 2016 malitere na Disemba 22, 2015, wee kwụsị na Maachị 20. Ọ bụ ọnwa na-adọrọ mmasị, nke dị na ya edere ihe ndekọ, ma mmiri ozuzo ma ọnọdụ okpomọkụ.
Dabere na amụma AEMET, a tụrụ anya na na mpaghara ugwu nke ala mmiri ahụ, mmiri ga-ezo karịa ka ọ dị na mbụ, na na mba ndị ọzọ nke mmiri ozuzo ga-adịgide n'ime oke ala; N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na mmiri anaghị ezo n’obodo gị, afọ a agaghịkwa enwe nnukwu mgbanwe. Ya mere ọ dị.
Ugbua na Jenụwarị 11, 2016 anyị na-ekwu maka a oké ifufe nke na-ebibi ebe ugwu, karịsịa na Pontevedra, Lugo na A Coruña. Ruo ụbọchị, mmiri ozuzo akwụsịghị ịpụ, idei mmiri na-ebute n'okporo ámá ma na-akpata mbuze, mbelata okporo ụzọ na ọbụna osimiri jupụtara. N’ọnwa a ka mmiri zosiri ike 90mm, 41% karịa nkịtị (63mm).
N’ọnwa Febụwarị anyị nwere ajọ ifufe ọzọ, na ebili mmiri nke ruru 11,95km na ifufe nke na-agbasi ike, nke ruru 170km / h na ugwu. Oge a, mpaghara kachasị emetụta bụ San Sebastián, na mgbakwunye na Galicia. Ma, mmiri zoro nke ọma n’ebe ugwu. Onwa a buru oke mmiri n'ozuzu, na nkezi mmiri ozuzo nke 88mm (uru 66% dị elu karịa nke nkịtị, nke bụ 53mm).
Na njem mmiri ozuzo nọgidere na ụkpụrụ nkịtị, ma e wezụga na akụkụ ndịda ọwụwa anyanwụ nke ebe ndịda ọwụwa anyanwụ na na Balearic Islands, nke dị ala.
Dabere na AEMET, ebe mmiri ga-ezo karịa etu esi atụ anya, ọ ga-abụ ebe Mercury na temometa ga-adị na ụkpụrụ nkịtị; kama, na mpaghara ndi ozo enwere 55% nke puru iche na ha ga enwe oge oyi karie ala. Enwetara ya ya
Maka ọtụtụ akụkụ ee. N’ọnwa Jenụwarị nkezi okpomọkụ bụ 9.5ºC (2,3ºC karịa nke nkịtị, na-ewere 1981-2010 dị ka oge nrụtụ aka), si otú a na-aghọ nke kachasị mma kemgbe 1961. N'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke ala mmiri ahụ na n'akụkụ ụfọdụ nke ndịda, anomaly thermal dịtụ ala, na 1ºC.
Na ọnwa Febụwarị na ọkara ọwụwa anyanwụ nke peninshula, agwaetiti Balearic na n'akụkụ ụfọdụ nke agwaetiti Canary, ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti 0,5 na 2,5ºC dị elu (oge ntụgharị: 1981-2010). Na Spain ndị ọzọ, ụkpụrụ ahụ dịgidere ma ọ bụ belata ntakịrị, ọkachasị n'akụkụ ugwu nke Ugwu Cantabrian, Sierra Morena, Sistema Central na Sistema Béltico. Igwe kacha dị elu bụ 0,2ºC karịa, yana pekarị 1,2 theC dị elu karịa ka ọ dị na mbụ, yabụ na diurnal thermal oscillation bụ ala ka ihe o kwesiri ibu.
Na Machị, okpomọkụ nọgidere na-agafe ụkpụrụ nkịtị, ọkachasị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ, gụnyere Balearic archipelago, quadrant southwest na na Canary Islands. N’ebe ugwu ugwu-ano enweghi oke mgbanwe.
Kedu oge udu mmiri 2018 ga-adị? Na ndị na-esote?
Agbanyeghị taa (July 11, 2017) ọ ka dị obere ịmara etu oyi ga-adị, o yikarịrị ka ọ bụ otu ihe ahụ ma ọ bụ yiri nke anyị gabigara, na nkezi okpomọkụ nke 8-9ºC, mana ruo mgbe ụbọchị ga-abịarukwu nso na ụdị amụma apụtaghị, ọ ga-esi ike iji obere nkwenye mara.
Na-eburu n'uche na, dịka amụma, 2016 ga-abụ ihe kachasị mma n'akụkọ ihe mere eme, karịa karịa 2015, na nke ahụ ihe El Niño ga - enyere aka na mercury na temometa ka na - ebili, nkezi okpomọkụ nwere ike iru 1,14ºC. Nke a pụtara na anyị ga-enwe oge oyi nke ga-abụ na-ekpo ọkụ ma na-acha ọkụ, karịsịa na mpaghara Mediterenian.
Agbanyeghị, El Niño ka na-arụ ọrụ n'etiti ọnwa 8 na 10, yabụ ọ bụrụ na amalitere ịmetụta mmetụta ya na Nọvemba 2015, ọ nwere ike (ọ bụghị nke doro anya) na na Septemba 2016 anyị ga-aga na-anọpụ iche. Mana nke a apụtaghị na ndekọ okpomọkụ anaghị atụ anya, ebe ọ bụ na okpomoku zuru uwa bu ihe omuma nke na agaghi akwusiỌ gwụla ma e mere ezigbo ihe iji belata ikuku nke gas na-emetọ ikuku, ụmụ mmadụ agaghịkwa akwụsị imetọ ụwa site n'otu ụbọchị ruo ụbọchị ọzọ. Na agbanyeghị, Afọ 10.000 ga-agarịrị maka ụwa ka ọ weghachi.
Ya mere, ma eleghị anya, anyị na-ejedebe inwe ezigbo akọrọ Christmas ọnụ, na-ekpo ọkụ karịsịa, n'okpuru-acha anụnụ anụnụ nke ga-enwe elu ịta nke griin haus gas, dị ka carbon dioxide.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Amụma » Kedu ka oge oyi ga-adị?
Ọ Dị Mkpa ka ndị na-emepụta ngwaahịa mara? Oge oyi ga-abanye
Iji hụ na nke kacha njọ
Zaghachi Omar Sanchez
Ndi oru ugbo, ya na ndi nwere mmasi iku ugbo, kwesiri imata ihu igwe di n’obodo ha ka ha mara ihe ha nwere ike ito. Site na okpomoku zuru ụwa ọnụ a, nke a na-adịwanye amụma.
edu lopez dijo
mgbanwe mgbanwe ihu igwe ọ nwere ike ime ka mmiri zoo na Spain?
Nzaghachi nye eduard lopez
Kama nke ahụ, ha nwere ike belata. N'ezie, na Mediterenian, dịka ọmụmaatụ, ha agbadatalarị na 27% ma na-atụ anya na ha ga-anọgide na-ajụ. E bipụtara otu isiokwu na akwụkwọ akụkọ Nature banyere etu mmiri ozuzo ga-esi gbanwee n'ihi mgbanwe ihu igwe. Bụ nke a.
Monica, ewerewo m ahịrịokwu ndị a sitere na edemede gị: «... okpomoku zuru ụwa ọnụ bụ ihe a na - agaghị akwụsị akwụsị, belụsọ ma e mere usoro dị irè iji belata ikuku nke gas na-emetọ ikuku, ma ụmụ mmadụ agaghịkwa kwụsị imetọ ụwa site n'otu ụbọchị ruo ụbọchị ọzọ. Ma n'agbanyeghị nke a, ọ ga-ewe 10.000 afọ maka ụwa iji gbakee…. ».
Site na ihe ị na-ekwu, njedebe nke ụwa na-eru nso n'ihi na ikpu ìsì nke ndị isi ụwa anaghị egbochi nsị nke gas na-emetọ ikuku na ọnọdụ okpomọkụ zuru ụwa ọnụ ga-abawanye ma mụbaa ruo mgbe anyị ga-eghe n'ụzọ nkịtị. Osimiri ga-apụ n'anya ma dịrị ndụ n'elu ala agaghị ekwe omume. Also na-ekwusi ike na n'okwu a na-eche n'echiche na mmadụ ga-akwụsị ịhapụ gas na-emetọ ikuku, ọ ga-ewe afọ 10.000 tupu ya agbake ọzọ.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ị ghọtara oke okwu gị mana ha ga-emenye onye ọ bụla ụjọ. Enwere m olile anya na ọha na eze anaghị atụ ụjọ n'okwu gị.
Dị nnọọ ikwu dị ka obere ihe ọmụma na dị ka ikpeazụ oyi na okpomọkụ nke a n'oge okpomọkụ a oyi ga-abụ oyi na ụfọdụ n'ógbè anyị ga-ahụ snow
O yikarịrị ka ọ dị mma, ee. Anyị ga-ahụ.
A na-erere unu niile na ndị ụgha, ọtụtụ okpomoku zuru ụwa ọnụ mana ọ nweghị ihe ekwuru gbasara cheamtrails. Maka kedu mgbe ị ga-akwụsị ime ndị mmadụ ikpe na ịkatọ gọọmentị gị….
Nke a bụ ihu igwe ihu igwe ọ bụghị nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ọ ga-eju m anya ma ọ bụrụ na oge oyi a dị ezigbo oyi, karịa ihe ọ bụla n'ihi na anyị nwere ole na ole dị oke ọkụ ... ma ọ na-ajụ oyi, na njedebe anyị ga-abụ ebe ugwu Mediterenian
Ọnọdụ okpomọkụ nke Spanish nwere ike ịrị elu ntakịrị, mana anyị ga-ahụ.
Gbanwee ihu igwe na ị ga-ahụ na mmiri na-ezo karịa
N'ezie, ọ bụrụ na anyị emetọghị, ihu igwe ga-adị iche. Ekele Luis.
Enwere m olile anya na ọ dị ezigbo oyi na Andalusia nke na-acha mgbe niile ma ike agwụla m maka oke oyi
I nweghi ike ichere ka oge ọkọchị gwụ, ee? heh heh Olileanya ọ dị mma ma ọ dịkarịa ala.
Na 2016 ahụ ga-abụ ọkọchị kacha ekpo ọkụ n'akụkọ ihe mere eme? Ọfọn, ọ gaghị adị, na 2015 anyị gweriri ebe a na Murcia mana afọ a adịghị nso afọ gara aga, na-ewepụ ụbọchị ezumike nke okpomọkụ dị elu, mana maka ihe anyị na-eme ebe a n'oge ọkọchị, amaghị m ị chọpụtala.
N'ọtụtụ ebe ọ dịlarị jụụ karịa nke gara aga, ọ bụ eziokwu. Ebe m bi (Mallorca), n'oge okpomọkụ bụkwa oyi, anyị nọrọ ọbụna ọtụtụ abalị na-enweghị onye ofufe. Ma nkezi okpomọkụ nke ụwa na-arị elu.
Miquel Vidal Barcelo dijo
Ndewo Monica si Mallorca, ị bụ eziokwu, oge ọkọchị adịla nwayọọ mana osisi na-anwụ maka akpịrị ịkpọ nkụ!
A ọmịiko niile
Zaghachi Miquel Vidal Barceló
Ọ bụrụ eziokwu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na mmiri adịghị, mmiri ole na ole dara adawo ozugbo. Ka anyi chee na mmiri na-ezo ugbu a na udu mmiri.
ajuju ga-atu oyi a oyi a? karia nke gara aga?
ndewo ajuju n’oge oyi a ga-ajụ oyi karịa nke ikpeazụ?
O yikarịrị ka oyi a oyi na Madrid? (N'ihi na ọ ga-ajụ oyi)
Enwere ohere karịa n'afọ a snow na Madrid? (Achọrọ m SNOW), ana m ekwu ya n'ihi na dịka ị na-ekwu na ọ nwere ike ịbụ ihe nju oyi ... Achọrọ m SNOW hahahahaha
Kedu ka oge oyi a ga-adị na Dallas Tx?
Zaghachi ka gilberto
Ọ gaghị ekwe omume ịmata n'ezie oge ọ ga-abụ na ọnwa 3-4. Ihe amara bụ na, ọ bụrụ na arụ ọrụ La Ni Laa rụọ ọrụ, North America ga-ajụ oyi. N’ezie, n’obodo ndị dịka New York enwere ike inwe nnukwu snowfalls.
Na Spen, a maghị otú ihe a ga-esi metụta, ọ bụrụ na arụ ọrụ ya. Mana ihe dị mma (ma ọ bụ ihe dị mma) bụ na mgbe oyi na-ekpo ọkụ, oyi ma ọ bụ ezigbo oyi na-abịa, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ na-erute ụkpụrụ dị ala karịa ka ọ dịbu ma ọ bụ afọ a.
Ozugbo anyị matara ihe ọzọ, anyị ga-agwa gị.
Ndewo, ọ dị ezigbo mma, olee otu m bụ Sandra na m nwere mmasị na isiokwu oyi m bi na Barcelona na m ga-achọ ịma ma ọ ga-adị ọhụrụ ma ọ bụ? Ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala, ọ na-enwe snow karịa ka ọ dị na mbụ n'oge a anyị na-enwe mmiri ozuzo karịa nke nkịtị n'ụzọ echegbula ma ọ bụrụ na ị nwetaghị ya ebe ọ bụ na ihu igwe siri ike, ekele
Zaghachi Sandra Naharro Gómez
Ọ gaghị ekwe omume ịmata ihe ihu igwe ga-abụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ ma ọlị.
Anyị ga-echere ma hụ ma ihe La Niña na-arụ ọrụ, wee hụ na Spain anyị hụrụ ya ma ọ bụ.
Na ụkpụrụ, enwere m obi abụọ na snow na-adaba karịa ọwụwa anyanwụ nke peninshula na agwaetiti Balearic. Ifufe siri ike ga-abịa site na North (Siberia, dịka ọmụmaatụ) ka anyị wee bụrụ oyi na Mediterenian, nke a na-akpọ oyi, ya bụ, ọnọdụ okpomọkụ na-erughị -4ºC ka edere.
Lee, n'oge oyi a nwere ike ịkarị oyi, n'oge oyi nke gara aga ọ na-ekpo ọkụ ọbụlagodi, igwe ikuku oyi bịara ọ na-adaba na oke mmiri, mana ọ bụghị dịka na 2015 m bi n'otu obodo dị na Aragon nke dị 150 mita site na oke osimiri ma enwere m hụrụ oké snow na m 16 afọ na m nwere ..
Ha na-ekwu ọtụtụ okwu banyere okpomoku ụwa mana ha anaghị ekwu na anyị nọ n'obere ice. Oge oyi na-ajụkarị oge ọ bụla, tụmadị na North America na Europe na Eshia ...
Ma gịnị ka ị na-ekwu Victor.
Imaghi ... i di egwu
Ọ ga-amasi m ma a ga-enwe oke mmiri ozuzo n'oge udu mmiri a. Daalụ nke ukwuu
Na ụkpụrụ m ga-asị ee, mana ị nweghị ike ịma nke ọma. Ọ ga-adabere na mpaghara nke obodo ị bi na, elu, ikuku, wdg.
Anyị ga-agwa 🙂.
Ndewo m, m si na Torre Pacheco dị na mpaghara Murcia ma achọrọ m ịma ma mmiri ọ ga-ezo. Ma ọ bụrụ na okpomọkụ dị n'okpuru nkezi ga-edekọ ya na oge mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ. Achọrọ m ịma ma ọdịda a ọ ga-ekwe omume ọdịdị nke ụjọ oyi DANA dị elu, daalụ.
O di nwute, ị gaghị ama nke ọma.
O yikarịrị ka ọ ga-adị ọhụrụ, na a ga-edebanye aha ụkpụrụ mmiri ozuzo nkịtị ma ọ bụ nke dị ntakịrị na mba ahụ, mana enweghị ike ịkọwapụta ọzọ ruo oge ụfọdụ gafere.
Kedu ụdị amụma ụbịa ị nwere maka peninshuland nke dị na ndịda ọdịda anyanwụ? Huelva Seville Cadiz na Badajoz
Ndewo, okwu banyere ụkọ mmiri ozuzo na mgbanwe ihu igwe na-atụ m ụjọ ma na-emenye m ụjọ nke ukwuu.M si n'obodo dị na Sierra de Huelva, Aroche na achọrọ m ịma ma anyị ga-enwe mmiri ozuzo n'oge mgbụsị akwụkwọ a na-abịanụ, ọ bụrụ na ọ ga-abụ oge oyi ma ọ bụ na anyị ga-ebido Ekele sitere na obodo mara mma nke Huelva.
Ndewo, olee oge oyi a na-atụ anya na Sierra Nevada, oge gara aga bụ ihe na-ekpo ọkụ, ọ bụghị ihe ndị a ===========
Ezi, kedu ka oyi ga-adị na Navarre? Ọ ga-ezo karịa nke gara aga? Olileanya ọ ga-adị ka na
Ndewo. M bi na Sagunto obodo, obodo dị na Valencia. Enwere m ike ọgwụgwụ nke okpomọkụ a nke afọ ndị gara aga na oge mgbụsị akwụkwọ-oge oyi nke Chichinabo. Ma oyi ma mmiri ozuzo. Na sultry iru mmiri nke na-abanye n'ime ọkpụkpụ. Na ha tinyere m na drọwa nke ndị na-akpa nkata, m dị mpako! Ana m arịa ọrịa nke ụzọ ụkwụ kemịkal ndị ahụ na-egbutu mmiri ozuzo mgbe enwere oke igwe ojii na-achọ mmiri ozuzo (eji m anya m hụ ya) ike gwụrụ m nke ukwuu maka mwute maka ọgbọ ọhụrụ 🙁
miguel angel sanchez lamuela dijo
Ndewo m, m si n'otu obodo dị na Aragon, ọkachasị Almonacid de la Sierra, echekwara m na m nwere ike ịgbanwe karịa mgbanwe ihu igwe. Mmiri na-ezo ma na-erughị ala, n’afọ a, ụkọ mmiri dị egwu, isi iyi na-ata, ihe ọkụkụ na-akpọnwụ. Echetaram mgbe m di na nwata ka mmiri zoo kariri ugbua, ma snow snow karie ugbua. Ihe m na-amaghị bụ na ọ bụrụ na ụdị ndụ ntorobịa a bụ iwu ma ọ bụ ihe ọzọ. Agaghị m ajụ maka amụma mgbụsị akwụkwọ n'ihi na ihe gbasara ihu igwe na-atọ m ụtọ nke na-atọ m ụtọ dịka ọ dị mgbagwoju anya mgbe m na-akọwa amụma ogologo oge. Tin ya mmiri ozuzo ike. M hụrụ n'anya na ọ na-ezo mmiri Ikele.
Zaghachi Miguel Angel Sánchez lamuela
Ndewo, na Nọvemba m ga-eme Camino de Santiago, French, ọ ga - ekwe omume ịmata oge ọ dị na mgbago ugwu Spain na Nọvemba?
Ndewo m si obodo dị na Valencia ihe dị ka kilomita iri abụọ. Si n'ụsọ osimiri ..na ọ bụrụ na m nụrụ banyere iwepu ma ọ bụ igbochi ya mmiri ma ọ bụ zere oké ifufe. Amaghị m ókè ọ bụ eziokwu ma ọ bụrụ na ọ bụ na amaghị m etu isi ha si eme ya .... Daalụ nke ukwuu
kedu ka oyi ga-esi gosiputa onwe ya n'ime nnuku nnuku, karia n'agwaetiti ndi odida anyanwu. Daalụ Monica
Zaghachi francisco javier perez armas
Ọ nwere ike ịdị jụụ karịa karịa na mba ahụ, ọ ga-abụ na mmiri ozuzo karịa ma ọ bụrụ na La Niña na-amalite. Ma ị maghị nke ọma.
Obodo Salvador dijo
Ezi ụtụtụ, na Valencia n'oge oyi a anyị ga - enwe ogo 3o 4, citrus ga - akpụkọta?
Zaghachi Salvador Segui
Gaghị ama n’ezie. Ihe m nwere ike ịgwa gị bụ na dabere na mkpụrụ osisi citrus, dị ka oroma ma ọ bụ lemon, ha na-ejide ala frosts dị nwayọọ ruo -4ºC.
nke ọma dijo
Echetara m n'ụzọ zuru oke na na tve1 na njedebe nke oge ikpeazụ ha kwuru na otu n'ime akụkọ ihu igwe ha nyere na dịka m amaghị ụdị ndị ha na-anya, oge oyi a na-abịa gafere nke gara aga, ya bụ, n'oge oyi a na-abịa ga-adị ma ọ bụ ọbụna hotter I .. Enwere m olileanya na ha hiere ụzọ
Zaghachi suaoker gaizto
Ka anyị nwee olileanya. Ma anyị ga-ahụ ihe ga-eme.
Ndewo Oriaku: Mónica sanchez, Achọrọ m ịjụ ma ọ bụrụ na afọ a ọ ga-adabara onye ndị mpaghara Lagunera
Achọrọ m ịjụ 🙂
Zaghachi ka monse
Nnọọ! Oriakụ Monica, obi dị m ụtọ na ọtụtụ mmadụ nwere mmasị na ihu igwe, enwekwara m mmasị ibi na Tijuana Baja California Norte na ọ bụ ezigbo akọrọ na okpomọkụ, obere mmiri ozuzo, maka afọ ole na ole mmiri ezobeghị dị ka ọ dị na mbụ ma n'oge ọkọchị a ọ gbagoro karịa nkịtị okpomọkụ. Anyị na-atụ anya na mmiri ga-ezo maka na mmiri dị mkpa. Banyere.
Ndewo Oriakụ Monica, ajụjụ m siri ike ga-abụ n'oge ọkọchị anyị ugwu ugwu Peruvian ga-enwe mmiri ozuzo ma ọ bụ na ọ gaghị
Ndewo, kedụ ka esi ewetara anyị n’oge mgbụsị akwụkwọ nke mpaghara nke cadiz?
Ka chifoo. Anyị na-enwe oke ifufe dị egwu na Barcelona nwere ọtụtụ akụrụngwa eletriki, nke na-adịgide adịgide n'obodo ahụ ma ọ dịkarịa ala awa 5 wee gaa n'ihu. Eziokwu bụ na a na-enwe ekele mgbe ọnwa Septemba dị ọkụ ma kpọọ nkụ, yana ndekọ okpomọkụ, n'agbanyeghị eziokwu na oge okpomọkụ n'ozuzu anaghị ekpo oke ọkụ.
Oge oyi? Onye ma.
O doro anya na a maara ọtụtụ ihe banyere climatology, ma ugbu a, enweghi ngwụcha nke ngwaọrụ anyị nwere na weebụ, na mgbakwunye na ozi mgbe niile. Anyị anaghị akwụsị ịhụ ụdị ihu igwe nwere amụma mgbe niile, ọbụlagodi enwere ụdị ihu igwe na-egosi akara ngosi ọnwa itoolu n'ihu, yana mgbanwe nke usoro ikuku niile kwa awa isii.
Mana ihe a niile anaghị ekwe gị nkwa ọ bụla, n'ezie ọ na - enyere anyị aka ịmatakwu ma ọ bụ ịkọwa ihe ndị ọzọ gbasara ihu igwe dị na mbara ala anyị, nnukwu kọmputa anyị mebere. Ma ihu igwe dị n’elu ụwa nwere ọtụtụ amụma ọgụgụ na-adabere na data anakọtara n’oge dị mkpirikpi. Mana ọ bụ na ụwa nọ na mgbanwe ihu igwe oge niile maka afọ 4.500.
Ezi eziokwu. Mgbanwe ihu igwe abụghị ihe ọhụrụ, ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ụwa.
Ma ugbu a, ekele maka teknụzụ, mmetọ na mkpa ọ dị ịwakpo oghere ole na ole na-acha akwụkwọ ndụ anyị hapụrụ, ụmụ mmadụ nwere ike ịgbanwe ihu igwe.
Nke ahụ bụ eziokwu, na ọ dịtụbeghị mbụ na akụkọ ntolite nke ụwa anyị ka ihe mmadụ kpatara banyere mgbanwe ihu igwe. Anyị na-emetụta ihu igwe ruo ihe karịrị otu narị afọ, na-eme ngwa ngwa n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya.
Nchikota mmadu na ihe ndi ozo dika ihe ndi Child-Girl ma obu Solar cycles n'etiti otutu ndi ozo, na eme ka odighi nso anya ihu igwe anyi karie ka o siri adi.
Emeghere ọtụtụ echiche nke si n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ, site na Ice Age ruo ihu igwe ọzara. Ma ihe doro anya bụ na ihe mmadụ na-akpata bụ ihe na-adịghị mma mgbe niile, mmetọ nke mbara ala n'onwe ya (Naanị nke anyị nwere) Atmosphere, Oceans, Earth, ihe niile rụrụ arụ.
Anyị bụ ihe otiti, onye nwere ọgụgụ isi ma ọ bụ na ọ bụghị nke ukwuu, Society enweghị ike ịkwụsị, anyị na-eri ọtụtụ, na-arịwanye elu na-arịwanye elu. Wa anyị anaghị eto, na ọ pere mpe ma pere mpe. Enwere amụma na-eme atụmatụ na na 2050 anyị ga-abụ mmadụ 12.500 nde mmadụ. Ugbu a anyị karịrị 7.000 na 1900 anyị bụ naanị 1.600 nde. A gaghị akwagide ụwa a, ọha mmadụ ga-ada.
Anyị kwesịrị ịgbanwe ọtụtụ ma ana m atụ ụjọ na ọ gaghị eme. Ọtụtụ mmasị ndị metụtara.
Ana m akwado Ultimatum na ụwa.
Mgbanwe ihu igwe bụ ihe nwere ike iweta oké mmiri ozuzo, n'oge ọkọchị na-ekpo ọkụ nke ukwuu ma kwa afọ na-amụ ihe, ebili mmiri oyi n'oge oyi ma sie ike, nke ga-eme snowfalls na Spain nke siri ike ma nwekwaa ohere karịa n'oké osimiri, obere okpomọkụ n'oge oyi, ma ị maara oké ifufe, nke dị na Spain nwere ike ịdị ike dị ka nke dị na Barcelona, ​​mgbe ọtụtụ ikuku oyi na-abanye na mbara igwe, ọ na-eweta enweghị ntụkwasị obi, oké osimiri ahụ dịkwa ọkụ.
Ọ bụrụ na ihe La Niña na-akpata ifufe SW Na Penisual Ibérica, ànyị ga-enwe mmiri ozuzo n'oge oyi karịa snow na ebe dị elu na Pyrenees?
Ndewo, m ga-achọ ịma ma ọnọdụ okpomọkụ ọ ga-ada na mpaghara Ciudad Real yana ọ bụrụ na mmiri ga-ezo karịa. Ebe ọ bụ na ugbu a, achọrọ ọtụtụ ihe n'ihi na ọ bụ ihe ihere ịgagharị n'ugwu ma hụ osisi akọrọ.
Ndewo Monica :) Otu ajụjụ, enwere m ahụ nfụkasị na ọkụ na ọkụ. M bi na Turis na Valencia na kwa afọ ọ bụ ihe egwu. Naanị iru mmiri ahụ nke na-agba ọkpụkpụ ma rie ụlọ ga-eri ya site nchara nchara.Ọ bụrụgodị na ọ bụghị n'akụkụ osimiri.
Adịzi m ọrịa, ya mere, egosiri m na onye na-anabata ahụ x na-anọ ya n’anwụ ụbọchị niile. Lee oge ọkọchị biri na 31st na New York afọ a na anyị gara na suspenders na 27 degrees ọ malitere na February 7 na 20 degrees na-amụba. Ewezuga ụbọchị ole na ole rụrụ arụ nke dara ada. Ajuju m bu.
Ahụrụ m amụma nke Cantabrian ma ọ bụ ọbụlagodi n'oge mgbụsị akwụkwọ eruola.
Ya mere, ọ ga-amasị m ịmara ma ọ bụrụ na mgbanwe ihu igwe na-emetụta mpaghara Mediterenian na ndị ọzọ abụghị nke ukwuu na nke ahụ? Lee anyị na ndị ọdịda anyanwụ. Nyaahụ. Ma ọ dịghị onye na amụma ọ bụla na-ekwu otú ahụ. Nke ahụ dị mma? Maka na mmiri anaghị ezo ebe a ma ọ bụ oge ọkọchị na ọkara ọkara, ọ dịkwaghị. Kedu ihe bụ mgbanwe ahụ anaghị emetụta ha nke ukwuu ma ọ bụrụ na ha nwere mmiri ozuzo? Valencia na-aghọ Spanish California. Si exo na Los Angeles e nwere ebe a na-akpọ Valencia na Santa Clarita na ọ bụghị mmiri zoro ebe ha na-adịghị ọbụna mara… Ọ malitere dị ka aki desertifying nta nke nta. Ọ bụrụ na aki na-emetụta nke ukwuu, gịnị kpatara na Mediterenian na anyị anaghị amalite ịkụ osisi x mmadụ ka ha bidoro ime ebe ahụ? Na mpaghara nke Africa cokindante na obviamnte ha na akpo ugwu ka ha biri n’iru mgbe niile ma ndi bi n’obodo a ma nyekwa mmiri ihe ubi ole na ole ha na-echegbu onwe ha banyere osisi ka ha ghara ida ihu igwe ahụ. Ana m ekele gị nke ukwuu maka itinye uche gị. Ekele sitere na Maria 🙂
Mgbanwe ihu igwe na-emetụta ụwa dum, mana ee, enwere ụfọdụ mpaghara ebe ọ kacha emetụta. N'ezie, na blọọgụ a anyị kwuru na ihu igwe nke Spain nwere ike ịdị ka nke Morocco.
Kedu ihe kpatara ụfọdụ ji bido n'oge mgbụsị akwụkwọ, ebe ndị ọzọ ka nwere okpomọkụ n'oge ọkọchị? Ọfọn, maka ihu igwe ka ọ bụrụ otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, ọtụtụ ihe ga-etinye aka: ọnọdụ, okwu okwu, ịdị elu karịa oke osimiri, oke osimiri, ikuku, ikuku anyanwụ, wdg, wdg.
Dị ka ọ dị, mgbe oké mmiri ozuzo na-esi n'ebe ugwu ma ọ bụ n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke peninshula ahụ, ọ rute Mediterenian, na karịsịa n'ebe ndịda, n'ihi na n'akụkụ ndị a, ịbịaru nso na ikuku akara ahụ, ụzarị anyanwụ na-aga n'ihu, yabụ n'oké osimiri Mediterenian na-ekpo ọkụ mgbe niile karịa, dịka ọmụmaatụ, Oké Osimiri Galician.
Banyere ajụjụ ikpeazụ gị. Amaghi m ihe m ga agwa gi. Ọ bụrụ na a kụrụ osisi n’obodo na obodo nta niile, ọbụghị oke ọhịa. Ihe ga-aka mma.
Ekele, na agbam ume.
Ndị ọkà mmụta ihu igwe na-anwa anwa katọọ otu ugboro na nsogbu niile a na-enwe kemgbe ọtụtụ afọ ka anyị kpughere na ebumnuche, n'etiti ndị ọzọ, nke iwepu mmiri ozuzo site na mgbasa nke ọlaọcha iodide, ndị nke anyị bụ asthmatic na Anyị na-enweta enweghi mmiri ka nke anyi niile
Antigonus Cardedonius dijo
Ọ bụ eziokwu na ihu igwe na-agbanwe, ọ na-eme ya oge niile, na mmadụ na-emetụta ya doro anya. Ugbu a, na 100% nke mgbanwe ihu igwe bụ anthropogenic, na na site na mbenata anwuru anyị jikwaa mgbanwe kwuru, ọ bụ nnukwu oke. Mgbe isi ihe kpatara ihu igwe bụ anyanwụ. Kedu ihe enwere ike iwepụta gas dị obere? ee Emegharịrị ọzọ? ee. Gbanwee otutu ihe? doro anya. Ma anyị enweghị ike ijikwa ihu igwe, ọ ga-akara m mma ịnweghị ndụ mgbe ọ dị.
Site n'ụzọ, CO2 abụghị gas na-emerụ emerụ, ka anyị ghara ịkọwa ya. Ọ bụ gas nke ndụ, nke na-azụ osisi. Na o nwere onodu ubochi bu ihe ozo.
Zaghachi Antígono Carjedonio
CO2 abụghị gas na-emerụ emerụ dị ka Nox, Co ... ọ bụ gas na-ekpo ọkụ.
Snow ọ ga-adaba n’oge afọ a na Soria?
Daalụ Monica maka nkọwa gị na nraranye gị.Anyị bụ mmadụ ebutala ụwa ma anyị na-aghọrọ mkpụrụ anyị kụrụ ... M bi naanị m, mụ na ụlọ ọrụ m kachasị mma, nwamba m, n'ime ụlọ, yana ekwukwa ọkụ. , ụbọchị ole na ole m ga-enwu ọkụ, n'afọ a ọ na-enye m na ọ ga-adị ebe ahụ na ite nke m tinyere dị ka ihe ịchọ mma maka oge ezumike .... Ndị nwamba m bụ nnukwu ndị na-ahụ maka ihu igwe ... ha na-akwadebe mgbe niile. maka oge oyi, mana ha nọọ afọ ole na ole, ahụrụ m ebe oyi “anaghị echegbu” ha. Ekele sitere n'ugwu.
Ndewo na 2017 anyị ga-enwe oge oyi karịa ka anyị nọ na ekele
Odika o gha adi na afo 2017 mana ihe anyi no na ekele
wow ezigbo amụma
onye nwe ụlọ dijo
Ndewo, olee mgbe oge oyi ga-amalite? Mmetụta kemmiri na ndị na-emetọ ala anyị hụrụ n'anya M hụrụ n'anya oyi n'oge afọ niile ...
O nweghi otutu aka ekpe. Na mbido Ọktọba, okpomọkụ a na-atụ anya ibido na Spain.
Echegbula, ihe niile abịarute. 🙂
Ọ bụghị otu: inwe, inwe ike Inwe.
Ihe inwe, inwe IKE
Ọ dị mfe ịmara ma mmiri ga-ezo ma ọ bụ na ọ gaghị.
Y’oburu na elu igwe di elu, odighi ozuzo
Ọ bụrụ na ọ bụ acha anụnụ anụnụ na ígwé ojii na-egosi, ị dị nnọọ ga-ele anya, ma ọ bụrụ na contrails amalite ịgafe site na mbara igwe, na m na-apụtaghị obere contrails hapụrụ azụmahịa ugbo elu na-apụ n'anya dị ka ụgbọelu na-aga n'ihu, ma ogologo contrails na-emeghe na urukpuru igwe ojii na-akpụ ,,,,, biko gaa na mmiri ozuzo.
Ọ bụrụ na ị hụ na igwe ojii dị ma ọ na-ezo ma i nwere ike ịhụ n’etiti ikpochapụ na ikpocha ụzọ ndị ahụ, nke m maara na ị ga-agwa m, odide, n’ezie mmiri mmiri ahụ, ga-apụ n’anya. ọzọ n’enweghị mmiri ozuzo.
Ọ bụrụ na ọ ga-ewepụ igwe ojii, ọlaọcha iodide, ọ bụrụ na ọ bụ iweli ọnọdụ okpomọkụ nke mpaghara ahụ, aluminom.
N'ụzọ dị ịtụnanya, a na-ahụ omume a ebe ọ bụ na Castilla la Mancha agbanweela ihe ọkụkụ ya maka mkpụrụ vaịn, tara ahụhụ na vinalopó ebe m si, yana mkpakọrịta nke ndị ọrụ ugbo, ndị na-azụ anụ ụlọ, na ndị nche obodo nke Murcia, Alicante, Valencia, Rioja, Balearic Islands katọrọ ndị a omume.
Na echiche nke ihe ekwuru maka CO2, ọ dị oge ụwa bịara ịnụ ụtọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% oxygen, (nke na-egbu ihe maka ihe niile dị ndụ n'ọtụtụ), n'oge ahụ ọnọdụ okpomọkụ ụwa dị elu nke ukwuu, na-ebute nnukwu ọkụ . Ọ dịghị ihe toro mgbe emesiri. A maara dịka Sahara, dịka ọmụmaatụ. ma ọ bụ ọzara, n'oge oke oke CO2, oke ọhịa.
Ekwetaghị m ya. Ma na ị ga-ele anya na mbara igwe.
Echere m na amụma AMT maka 2017
ha na-agbanwe agbanwe karịa afọ gara aga.
Chọghị ime ka mkpịsị aka gị jide, zuru oke.
Burritos! Tupu i jighị nkwanye ugwu dị ukwuu nye ozizi nke ijikọ ụwa ọnụ, dere akwụkwọ!
Chepụta echiche ụgha nke okpomoku zuru ụwa ọnụ! Ọ bụ mgbe niile ka ọ bụ! Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya!
Let ga-ekwe onwe gị megharịa gị, ị nweghị echiche!
A mara eziokwu mgbe niile, ndị ọkà mmụta sayensị na-akwụwa aka ọtọ gosipụtara ya. Ihe kachasị mkpa na-agbanwe ihu igwe nke ụwa a bụ mmetụta nke kpakpando nke ọ na-agba gburugburu nwere na ndọta ya.
Omume dị ala (opekempe) nke ikuku na-eme ka ubi gharazie ịdị, nke na-enye ohere ka ikuku ụzarị iru elu nke ikuku, na-ewepụta nitrogen oxides, onye na-eweta igwe ojii, na-agbanwe ma na-eme ka ikuku nke ikuku dị na mbara igwe, wee dị jụụ, afọ afọ, ikuku, na-eme ka jet na iyi na-agbanwe trajectory nke oke osimiri. Ndalata nke ndọta nke ụwa a na-arụkwa ọrụ na mbugharị tectonic, ya bụ, ọ na-eme ka mbara ala ghara ịba ụba, yana ọrụ mgbawa.
A hụla ihe nbelata nke nghọta ikuku nke ikuku na-akpata site na obere ọrụ kemgbe 2010. Oge zuru ezu agafeela iji merie nrụrụ ọkụ nke oke osimiri na ọnọdụ ọhụrụ. Ọgwụgwụ nke oge a na-ekpo ọkụ n'oge na-adịbeghị anya pụtara ìhè ma dị nso. Ihu igwe agaghị adịkwa ka ọ dị na narị afọ nke XNUMX. Nke ahụ gwụrụ.
Site ugbu a gaa n'ihu, a gaghị enwe ike izere obi jụrụ ma ọ bụrụ na, dị ka e zubere, usoro ntụgharị anyanwụ nke minima ga-eme, n'usoro, nke bụ 95% doro anya!
Ọ dịkarịrị ike, na ọ bụ mmalite nke glaciation na-esote kwesịrị ekwesị, ọ bụrụ na otu oge oyi a gafere, nke oge nke na-agaghị erughị narị afọ abụọ, nke kachasị ogologo na Holocene, ọchịchọ adịghị ike nke ụwa na-agba ya gburugburu axis anaghị ekwe ka ụzarị anyanwụ mee ka mmiri gbazee snow na ice a chịkọbara na mpaghara nke ugwu ndị dị elu, n'ihi na ndị a yikwara ụwa, ụwa wee daba na NKPUKWU nke afọ 100.000 nke oge!
Zaghachi JUAN ÁNGEL MORENO
Okwu ugha, ebiela m na Madrid ruo afọ iri abụọ, ihu igwe dịkwa egwu, nke mbụ enweghị mmiri, abụọ enweghị mgbụsị akwụkwọ, atọ kwa Tutu afọ a 20 Enweghị oge ọkọchị, enwere mmiri-iyi, shit, n'oge na-adịghị anya ọ ga-aghọ Sweden ma ọ bụ otu n'ime mba ndị ahụ kpụkọrọ akpụkọ, ị ga-ahụ, na enweghị okpomoku zuru ụwa ọnụ, enwere udo ụwa;
na izu ọjọọ niile, Chemtrails na obi jụrụ ụwa, o doro anya na m na-akwado ndị hapụrụ ọka ha na ájá n'akụkụ ndị a, ihe Maazi Juan Angel Moreno na-ekwu, ezigbo, eziokwu, gụghachi ihe ọ na-ekwu
Oge ọkọchị nwere ike ịdị ọkụ karịa ka ọ dị na Spain niile